48,000 oo ajaanib sharci darro ah ayaa la waayay ka dib markii lagu sii daayay Mareykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » 48,000 oo ajaanib sharci darro ah ayaa la waayay ka dib markii lagu sii daayay Mareykanka
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Qabashada ajaanibka sharci darrada ah in ka badan saddex jibaarmay in ka badan 1.7 milyan sanad xisaabeedka dawladda ee dhamaaday Sebtembar 30, 2021, marka loo eego xogta Kastamyada iyo Ilaalinta Xuduudaha ee Maraykanka (CBP).
Ku dhawaad ​​48,000 oo ajaanib sharci darro ah, oo lagu sii daayay Maraykanka Maamulka Biden Muddo shan bilood ah oo ku beegan 2021, hadda lama heli karo ka dib markii ay iska dhega tireen amarka lagu hubinayo maamulka socdaalka ee Maraykanka.
Tobanaan kun oo ajaanib sharci-darro ah ayaa lagu sii daayay Maraykanka iyadoo la raacayo barnaamij loogu talagalay in lagu dedejiyo habaynta socodka muhaajiriinta.
Ku dhawaad ​​104,000 oo shisheeyaha sharci darrada ah ee la soo saaray ogeysiisyada inay ka warbixiyaan (NTRs) intii u dhaxaysay Maarso 21 iyo Ogosto 31, 2021, in ka yar 50,000 waxay buuxiyeen waajibaadkooda ah inay iska xaadiriyaan xafiiska goobta socdaalka 60 maalmood gudahood, sida ay sheegtay Waaxda Amniga Gudaha (DHS). ) xog shalay soo shaac baxday.
In ka badan 54,000 oo kale ayaa iska indho-tiray shuruuda ah in lagu wargaliyo Laanta Socdaalka iyo Dhaqangelinta Kastamada (ICE), oo ay ku jiraan ilaa 6,600 kuwaas oo wakhtiga kama dambaysta ah ee 60-ka maalmood ah aanu dhicin wakhtiga xogta la ururiyay.
"Xogta DHS waxay muujineysaa in dhaqanka soo saarista NTRs uu ahaa guuldarro aad u xun," ayuu yiri Seneterka Mareykanka Ron Johnson (R-Wisconsin), kaasoo dhawaan helay tirooyinka isagoo ka jawaabaya warqad uu u diray Xoghayaha DHS Alejandro Mayorkas Oktoobar hore.
Isticmaalka NTRs waxa uu bilaabmay Maarso 2021, markaas oo ajaanib badan oo sharci darro ah ay imanayeen koonfurta US xuduud in DHS ay u baahnayd si ay u yarayso buuxdhaafka xarumaha dadka lagu hayo. Intaa ka hor, muhaajiriinta lagu sii daayay gudaha Mareykanka si ay u sugaan dacwadaha masaafurinta waxaa la siiyay ogeysiisyo ay ku soo baxayaan (NTAs). Taas macnaheedu waxa weeye in la dejiyo taariikho maxkamadeed ajaanibka sharci darrada ah, kuwaas oo u baahday dukumeenti dheeraad ah iyo waqti habayn.
Laakiin in la siiyo NTA ayaa ah mid aad uga fog in la tarxiilo, maadaama nidaamka socdaalka Mareykanka uu yahay mid caan ah oo la taageero, dad badan oo muhaajiriin ah ayaana si fudud u diiday inay ka soo qeyb galaan dhageysiga maxkamadda. Johnson wuxuu xusay in xitaa ku dhawaad ​​50,000 oo NTR qaatayaal ah oo u soo wargeliyay ICE sida la amray, in ka yar 33% la siiyay NTAs, taasoo la micno ah inaysan wali haysan taariikh maxkamadeed oo soo socota oo ay ku sii sugnaan karaan Mareykanka si aan xad lahayn.
54,000 ee la la'yahay NTR waxay ka mid ahaayeen in ka badan 273,000 ajaanib sharci darro ah oo maamulka Biden ku sii daayay US laga bilaabo Maarso ilaa Ogosto. Johnson wuxuu sheegay in muhaajiriintaasi ay wajahayaan fursad yar oo laga saarayo. Marka lagu daro kuwa la soo saaray NTA-yada ama NTR-yada, qaar badan ayaa lagu sii dayn sharafeed ku soo galay Maraykanka iyada oo aan wax shuruudo ogaysiis ah ama taariikho maxkamadeed lahayn.
Isgoysyada sharci darrada ah ayaa kor u kacay heerkii ugu sarreeyay ka dib markii Biden uu xafiiska la wareegay bishii Janaayo ee la soo dhaafay wuxuuna si degdeg ah u bilaabay inuu furfuro siyaasadaha dhaqangelinta ee madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump. Qabashada ajaanibka sharci darrada ah in ka badan saddex jibaarmay in ka badan 1.7 milyan sanad xisaabeedka dawladda ee dhamaaday Sebtembar 30, marka loo eego xogta Kastamka iyo Ilaalinta Xuduudaha ee Maraykanka (CBP).
Cabsida CBP ayaa kor u kacday 61-sano oo sarreeya sanadka kalandarka 2021 ka dib markii ay hoos ugu dhacday 45-sano oo hooseysa siyaasadaha Trump ee 2020.
Tirooyinka CBP kuma jiraan tirada aan la sheegin ee ajaanibka sharci darrada ah ee ka tallaaba xadka iyada oo aan la qaban.